' विदेशी आएर के–के मन्त्र सुनाए, जी न्यूजको अन्तर्वार्ता नाटक नै हो '- प्रचण्ड - Vishwanews.com
' विदेशी आएर के–के मन्त्र सुनाए, जी न्यूजको अन्तर्वार्ता नाटक नै हो '- प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटन गरेर संविधान भाँचेको आरोप लगाएका छन् ।
‘केपी ओली बैठकबाट भाग्ने भगौडा हो । यो प्रचण्डलाई खेद्ने कारण के पर्‍यो ? विदेशी आएर के–के मन्त्र सुनाए । जी न्यजको अन्तर्वार्ता नाटक नै हो । उहाँले भारत र आफ्नै पार्टीबाट हटाउन खोजे भन्नुभयो । हामीले हटाएनौं नि । तर, भारतको दबाबमा यसलाई तपाई के भन्नुहुन्छ केपीजी ? मैले भारतलाई भन्न खोजेको होइन ।
म भएको भए त्यति नै बेला राजीनामा दिइहाल्थें’, उनले भने, ‘पहिले पनि सरकार छोड्नुपर्यो भने कुर्सी भाँच्छु भन्नुभयो । तर, उहाँले संविधान, गणतन्त्र नै भाँच्नुभयो । सबै भाँचभुच पारेको छ । भाङ खाएर नाचेको जस्तो । निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत पनि केही होइन । तानाशाहा जस्तो । कमिलाको प्वाँख उम्रिएपछि छिट्टै चिप्लिन्छ । उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो । पोहोरबाट उहाँले पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो । अहिले त उहाँले घरमै आगो लगाइदिनुभयो । सर्वोच्चमा सरी भनेर निवेदन दिनुभयो ।’